Izindlu zaseShumbuk 2 BHK Apartment A, Gangtok
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguVivek
Ukubonelela ngendawo yokuhlala enefenitshala epheleleyo, embindini wedolophu yinkcazo yobunewunewu kunye nentuthuzelo. Indawo ibonelela ngobumelwane obuhle, indawo yentengiso ekufutshane kwaye inika imvakalelo yendlela yokuphila yasekhaya.
Sinikezela ngamagumbi ahlukeneyo ngokweemfuno zeendwendwe. Ineendidi ezintathu ezahlukeneyo zamagumbi- amagumbi okulala amathathu, amagumbi okulala amabini kunye negumbi le studio elinamagumbi okuhlambela ancanyathiselwe, indawo yokuhlala kunye nekhitshi kwigumbi ngalinye.
Ukufika kwindawo yam- Njengoko usuka eSiliguri, yehla eTadong, eGairigaon, eGangtok. Uya kufumana indlela ekhokelela ngasekhohlo ukusuka kuhola wendlela ojikayo. Indlela ibizwa ngokuba yiNdlela yoKhuselo. Thatha indlela ukuya kwindawo. Kukho ibhodi yemiqondiso ngaphandle apho uya khona.
I-Apartment-Njengoko ungena, uya kufumana isicwangciso somgangatho ovulekileyo wegumbi lokuhlala kunye nekhitshi. Kukho ifanitshala ebekwe kakuhle enesofa, itafile yekofu, itafile yokutyela kunye nekhitshi onokuthi ulibone kwindawo yokuhlala. Ikhitshi inazo zonke izixhobo eziyimfuneko ozidingayo. Inefriji, iimicrowaves, izixhobo, isitovu segesi, isilinda kunye netshimini. Inamagumbi okulala amathathu. Kukho amagumbi amabini okulala. Onke amagumbi okulala aneendawo zangaphakathi ezifanayo ezineebhedi ezimbini, iisofa, iTV, iitafile zekofu, iitafile ezisecaleni, iiwodrophu kunye namagumbi okuhlambela ancanyathiselweyo. Amagumbi okuhlambela aneebhafu zokuhlambela, iikhomowudi kunye neendawo zeshawari ezinegiza kwindawo nganye kuzo.
Lobby- Kukho indawo yokungena evulekileyo ngaphandle ekungeneni kwakho. Ngasekhohlo kwakho yindawo yolwamkelo enedesika yoMphathi. Kufuneka uqhagamshelane naye xa ufuna isithuthi, cwangcisa ukhenketho, okanye ufuna nantoni na. Kukho izinyuko ezikhokelela kumanqanaba ahlukeneyo amagumbi.
Indawo ekufutshane ibandakanya:
Ubomi basebusuku kunye neeBar eTadong-iFusion yokutyela enebha, indawo yokutyela emfusa enebha kunye nomculo ophilayo ngeentsuku ezithile, indawo yokutyela yeLyric, iBar kunye neKaraoke kunye nezinye iindawo zokutyela ezininzi ezineebha.
Ubomi basebusuku kunye neePubs eGangtok-iGangtok ineebhari ezininzi, iindawo zokutyela, ii-hangouts zasebusuku, ii-discos ngaphakathi najikelele. Njengoko ufika kwidolophu ephambili, unokuhamba nje kwaye ufumanise ezi ndawo.
Indawo yokubona indawo ekufutshane-iRumtek Monastery, Rey, Ganesh Tok, Tashi View Point, Banjhakri Falls, kunye nezinye ezininzi.
Ezinye iiNdawo ezikufutshane- iKholeji kaRhulumente, iSibhedlele saseManipal, kwiYunivesithi yaseSikkim.
Umbuki zindwendwe ngu- Vivek
Ndihlala enkomponi enye. Kakhulu, ndingaphakathi kwaye ndijikeleze indawo. Kwimeko yokungabikho kwam, umphathi kunye nabanye abasebenzi bahlala bekhona ukuze bakunyamekele.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- East Sikkim